Wasiirka cadaalada iyo diinta & awqaafta Puntland oo iclaamiyay salaad roob-doon ah iyadoo ay jiraan abaaro baahsan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiirka cadaalada iyo diinta & awqaafta Puntland oo iclaamiyay salaad roob-doon ah iyadoo ay jiraan abaaro baahsan
September 30, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiirka cadaalada diinta iyo awqaafta ee Puntland, Saalax Xabeeb Jaamac. Sawirka: Puntland Mirror.
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka cadaalada iyo arrimaha diinta ayaa dhamaan shacabka Puntland ugu baaqay in ay oogaan Salaada roob-doonta maalinta Isniinta ee soo socota.
Isaga oo la hadlayay saxaafada maxaliga ah wasiir Saalax Xabeeb Jaamac ayaa ugu baaqay bulshada Puntland in ay isugu soo baxaan cafis weydiisashada Rabi ayna oogaan salaada roob-doonta.
Ku dhawaaqida wasiirka ayaa imaanaysa iyadoo ay abaaro baahsan ka jiraan gobolada Puntland.
Xilli roobaadka Dayrta ee ugu yar Soomaaliya ayaa la filayaa inuu da’o inta u dhaxaysa bisha Oktoobar iyo November.
November 13, 2016 Puntland oo soo gabagabeysay wejiga labaad ee doorashada xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya